Linux ogba aghara: Revolutionizing Arch | Site na Linux
Luigys toro | | Nkesa, GNU / Linux
Mgbe obere oge na-enweghị ịgbanwe distro na kọmputa m n'ihi ule dị mma nke anyị na-arụ na ngwaọrụ dịgasị iche iche na-emeghe, ahụrụ m otu n'ime distro ndị ịchọrọ ịwụnye n'ihi na ị gaghị eme ọtụtụ ihe iji mee ya Emere ya nke ọma ma hazie dịka mkpa gị.
Linux rụrụ arụ a maara dị ka Chba ebe ọ bụla ma n'ihi ikike nsogbu na Arch ha nwere ịgbanwe aha ha, distro ahụ dị ezigbo ọkụ ma nwee ezigbo onye nhazi nke na-enye anyị ikike ịwụnye ọtụtụ ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Ọ bara uru ikwu nke ahụ Anarchy Linux dabere na Arch Linux mana ọ naghị akwado ụdị nne na nna, na-ekesa maka 32-bit na 64-bit ijeya na otu ndụ cd mbipute nke ahụ na-enye anyị ohere wụnye desktọọpụ na ihe nkesa mbipute nke distro n'ime ha anụ na LTS iche iche.
Enwere ike ịchọta nyocha dị elu nke distro a na vidiyo na-esonụ:
1 Nrụrụ Anakpọ Linux Atụmatụ
2 Mkpebi banyere Anarchy Linux
Nrụrụ Anakpọ Linux Atụmatụ
Linux rụrụ arụ nwere ka nzube gbanwee ụwa site na iweta ike nke ngwa ngwa ngwa ngwa na ngwa Arch Linux, a tụụrụ ime ya ka ndị mbido, ndị nyocha na ndị ọkachamara nwere nnukwu ihe chọrọ maka kọmputa ọ bụla. N'etiti atụmatụ ndị a ma ama nke distro a, anyị nwere ike ikwu:
Dabere na Arch Linux
Onye nrụpụta dị ike nke na-enye anyị ohere ịhazigharị omume nke distro anyị site na mbido, yana ohere ịhọrọ ihe nkesa nchekwa, kernel a ga-arụnyere, mmemme ntọala, ọnọdụ, gburugburu desktọọpụ, ndị ọrụ yana anyị onwe anyị kwa na-enye ohere kwesịrị ekwesị akara nkebi.
Enwere ike ịwụnye desktọọpụ na nsụgharị nsụgharị nke Linux Anarchy Linux.
Ekwe omume nke wụnye dị iche iche ndabere desktọọpụ gburugburu (Budgie, Cinnamon, Gnome, Openbox na xfce4).
Inwe nchekwa nke onwe gị na ngwa ndị otu mmepe distro na-arụ.
Anyị nwere ike ịhọrọ ịwụnye ụdị ngwa dị iche iche kesara na edemede ndị a: Audio, Database, Games, Graphics, Internet, Multimedia, Office, Programming, Terminal, Editors Ederede na sava.
Ohere nke ịwụnye oriọna, LEMP, apache, nginx, bind, openssh sava n'etiti ndị ọzọ.
Nwere ike hazie ssh, ftp na apache nnweta site na nwụnye.
Ìhè gwụchara, yana nchikota dị ụtọ nke ọma yana menu ngwa dị mma ma dị mma.
Ọ na-egosipụta ọtụtụ ntọala nke distro ahụhụ, mmelite, akara nche na nchekwa ndị ọzọ.
Nkwado maka ọtụtụ draịva na ngwaọrụ.
Enwere ike ịchọta ndepụta zuru ezu nke atụmatụ ngwa ahụ Ebe a. Anyị nwekwara ike ịlele gallery nke nwụnye usoro n'okpuru:
Mkpebi banyere Anarchy Linux
Igwe a dị ike dị mfe, enwere m mmasị na ya n'ihi na m bụ onye na-eso ụzọ nkà ihe ọmụma Arch na distro ya, ọ nwere nkwado maka ụdị ụlọ na akụrụngwa dị iche iche, gbakwunye ya enwere ike itinye ya na gburugburu desktọọpụ dị iche iche.
Onye nhazi ya nwere ọtụtụ ngwa na nke m kwere ka m nwee distro na-arụ ọrụ zuru oke mgbe m wụnyechara, ebe ọ bụ na enwere m ike site na mbido ibugo sava LAMP m, m nweta ssh ma kwado ha na ngwa nke m na-eji.
Enweghị m mkpa ịwụnye ihe ọ bụla karịa ihe onye nrụnye n'onwe ya nyere m, nke m weere dị ezigbo mkpa, n'oge ahụ enwebeghị m ọdịda ọ bụla na arụmọrụ ya dị oke mmiri, yabụ ọ bụrụ na ị hụrụ Arch a n'anya Ọ ga-abụrịrị-distro distro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Linux ogba aghara: Revolutionizing Arch
You nwere ike ịkọwapụta ihe ndị ọzọ?
penguuin ọzọ dijo
Zaghachi penguin ọzọ
Achọpụtara m banyere nkesa a na Elav System Inside channel na ọ bụ ọkacha mmasị m KDE distro. Kpamkpam kwụsiri ike na mmelite kachasị ọhụrụ maka sọftụwia niile ị rụnyere.
Ya nwụnye bụ n'ụzọ zuru ezu customizable na ị na wụnye ihe ị chọrọ.
Ọfọn, dịka m na-achọ, enweghị m ike ịchọta ụdị nwụnye maka bits 32.
Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị omume igosi njikọ ntanetị, m ga-enwe ekele maka ya. Agbalịrị m ụdị ochie nke Ebe ọ bụla
(32 bits) na VirtualBox mana ọ na-enye mperi mgbe ị na-achọ nchịkọta.
Achọtala m njikọ a iji budata ụdị abụọ. Echere m na ọ ga-enwe ụdị 32 na 64 bit mana anaghị m anwale ya:
You'll ga-agwa m otu ị si eme ma ọ bụrụ na ị nwekwara ụdị ahụ.
Ana m ekele gị nke ukwuu César, mana m chọrọ ịnwale ụdị 32-bit nke Anarchy Linux, ọ bụghị ụdị Archlinux nke m tinyegoro n'oge gara aga na PC ochie m.
Na weebụsaịtị Anarchy naanị ihe m gụrụ bụ na ọ na-akwado sọftụwia 32-bit, mana anaghị m ahụ echichi iso maka ụlọ ahụ. Echere m na dịka Arch, ha ga-akwụsị ịhapụ nsụgharị ndị ahụ.
Nkà ihe ọmụma Arch bụ na ọ bụghị maka mmadụ niile, ọ bụ maka ndị jikwaa ya, nke ahụ bụ ihe dị mkpa banyere njiko ị nwere ike ịhọrọ ịwụnye yana ọ bụghị na nsụgharị ndị a «» clones ị nweghị ohere ahụ ịwụnye ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị chọghị ị ga-ewere ya. n'ihi na e nwere distros dị ka ubuntu ndị bụ maka ndị malitere. Ọzọkwa ihe ga - eme mgbe ngwugwu dara ma daba na gburugburu ebe a na - ese onyinyo (nkà ihe ọmụma bụ ịnweta ngwugwu kachasị na nke kachasị ọsọ) mana nke ahụ na - eduga na ịghara ịbụ nke kachasị mma ma ọ bụ karịa.
Ebe ọ bụla bụ klọọkụ dị mfe nke nwere usoro nrụnye preconfigured (ọ naghị arụ ọrụ ọzọ, nchịkọta anaghị ebudata). Echere m na distro a bụ maka ndị na-enweghị mmeri na-agaghị ama ihe ha ga-eme mgbe ụfọdụ corduroy mere ha. ọ ka mma ịghara ịkọkọta ma jiri ubuntu.
Zaghachi Alejandro Urrutia
Manuel Alcocer J. Nnọọ dijo
Zaghachi Manuel Alcocer J.
Ndewo, gini bụ ihe dị iche na Arch Linux na Linux Linux?
Zaghachi Samuel Díaz
Iji dokwuo anya echiche ...
Naanị m hụrụ otu isiokwu banyere Anarchy Linux distro ebe ekwuru na a ga-ekesa ya maka ihe owuwu 32-bit. O juru m anya ma chọọ ịnwale ya n'enweghị ihe ịga nke ọma, ọ bụ ihe niile. M nwere ochie PC na-amasị m na-anwale distros na ya.
Mbụ m wụnye ha na Virtualbox ma ọ bụrụ na ha jide m ntị, ha na-aga PC.
Enweela m Archlinux, Fedora, Debian na ọbụna FreeBSD na Gentoo na pc ochie ahụ. Abụọ distros abụọ a dị ka ọ dị ntakịrị ịwụnye (ọbụlagodi maka ọkwa m) n'agbanyeghị na ọ nweghị ihe anaghị edozi site n'ịgụ na ịchọ ngwọta na weebụ, mana Archlinux adịghị ka o siri ike ịwụnye ma ọlị. Enwere ọtụtụ nkuzi na ozi gbasara ya.
Nke ahụ kwuru, ihe Mania na-eme "elitists" nwere maka ịgwa ndị mmadụ ihe ha ga-eme ma ọ bụ ihe ha ga-eme,
ihe dị mma na ihe na-abụghị wdg ... Kedụ ihe ọzọ nkesa ndị mmadụ ga-eji nye gị? Ka ha nwalee ihe ọ bụla ha chọrọ.
Maka Samuel Díaz ...
Dị ka m maara, Archlinux arụnyere na-adabere na iwu sitere na njikwa ahụ wee nweta ntakịrị nwụnye, ya bụ, ozugbo arụnyere usoro ị ga-etinyerịrị desktọọpụ achọrọ (Gnome, KDE wdg ..) na ngwa niile, ọkwọ ụgbọala na faịlụ niile. dị mkpa.
Na ogba aghara (interface interface) ị kaa akara ihe ịchọrọ ịwụnye, gụnyere ngwa nke ụdị niile.
Ndị a distros na-amara na pụtara nke Arch, nke bụ ime a ntakiri echichi na-amụta a bit nke-esi na aka gị na-eme ihe ntuziaka.
Tupu distros ndị a, Fedora ma ọ bụ Ubuntu ka mma, ọ dịkarịrị mfe maka onye ọrụ njedebe ma kwụsie ike.
Site n'ụzọ, Markus, FreeBSD abụghị Linux distro, n'eziokwu, ọ naghị eji kernel Linux, ọ bụ OS zuru ezu dabere na BSD.
Nkọwa ikpeazụ (Achọghị m ịga n'ihu na isiokwu a).
Amaghị m, anaghị m ekwu ebe ọ bụla na FreeBSD bụ linux, ekwuru m ya iji gosipụta otu o siri sie ike ịwụnye, ọ dịghị ihe ọzọ.
May nwere ike ịbụ eziokwu gbasara "ihe Arch pụtara", n'eziokwu mgbe mbụ m wụnye ya, otu ebumnuche m bụ ịghọta obere ihe ọ na-eme.
Dika m mara na onye obula nwere uche ya ma adighi m n'obi ime ka onye obula chee echiche ozo, ihe m ga-ekwu bu na o di m nma na onye obula choro itinye Anarchy, Antergos, Manjaro, Namib wdg ...
Ọfọn, wụnye ya ma nwee obi ụtọ na ya.
M ga-aghọta ọnọdụ gị ma ọ bụrụ na ArchLinux kpebiri na mberede ịgbakwunye ngwa ma ọ bụ ihe nrụnye, mana anaghị m ekwenye ịkatọ distros ndị ọzọ n'ihi na ha dị mfe ịwụnye.
Nke a na echetara m onye agbataobi m were iwe na ihe niile n'ihi na mgbe ọ bụrụla onye isi oche nke obodo ahụ ma nwee ọgụ na ijikwa ọtụtụ nsogbu, ọtụtụ n'ime ha họọrọ iwe onye njikwa ụlọ, ihe ọ gabigara , ugbu a ndị ọzọ ga-enwe ya ọ dị mfe na nke ahụ abụghị eziokwu ...
Agbalịrị m ịwụnye ya mana mgbe m rutere ntinye nke ngwa ọ gosipụtara njehie ma kagbuo ntinye ahụ.
Na njedebe m ga-eji ezigbo Arch na-aga, enwere m olileanya na ha ga-edozi nsogbu ndị ahụ n'ihi na enwere m mmasị na ya oge mbụ m jiri ya.
Zaghachi Jorge MG
Na-agba ume ??????
Ọtụtụ na-eme mkpesa banyere mania ndị enyi ọhụrụ a clones na enyi na eziokwu bụ na ọ bụ ezie na e nwere ndị ọzọ, n'ihi na onye nwere ka ndị puritans edo onwe ha n'okpuru ha na ha nwere ikike zuru oke iji nke a ma ọ bụ na distro n'ihi na ha maara otú e si wụnye ya nzọụkwụ site nzọụkwụ usu (enweghị nkuzi). Echere m na ndị a na-eme ndụdụ ndị a "dị mfe" anaghị eche maka ihe ha ga-ekwu maka ndị Puritan kama ọ bụ maka iweta otu ụdị linux-like os na otu. Echetara m ihe dị ka afọ 4 gara aga na ahụrụ m nkuzi kachasị na nkọwa zuru ezu iji wụnye archlinux na m soro ya na leta ahụ ọbụlagodi pịa ahụ jụrụ ịwụnye ihe nkesa ihe osise na m ga-ahọrọ onye na-ese ụlọ, mgbe ahụ gara aga na Ugbu a na manjaro, enwere m mmasị na archlinux (ọrụ ya na pacman ya mara mma, nke m chere na ọ na-enye m ọtụtụ kicks to apt and yum) mana ha ga-etinye otu ụdị ntanetị maka ndị chọrọ ịwụnye ezigbo arch na-enweghị ọghọm nke ịwụnye arch. .
PS: na nke ikpeazụ a anaghị m ekwu na ha ga-aga n'ụzọ ahụ kama na ha meghere ụzọ ọhụrụ maka ndị chọrọ ịmata usoro ahụ na-agaghị agafe otu n'ime ụmụnne ha.
PD2: Echere m na distro nke na-enye ọtụtụ ụdị nrụnye (siri ike: dị ka gentoo - mid: dị ka arch - dị mfe: dị ka slackware / debian cli - na ultra-mfe: dị ka ubuntu / fedora) ga - abụ distro doro anya, n'ihi na ọtụtụ ga - amata ha , ọtụtụ ga-enwe ike ịmekọrịta na ọdịiche nke ndị na-eji nke a ma ọ bụ ụdị ntinye ahụ ga-ebelata ...
Nke ahụ bụ otu okwu gbasara Anarchy, onye nhazi CLI nwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche ma ọ bụrụ na ịhọrọ nke omenaala. I nwekwara ikike ịwụnye desktọọpụ kachasị dị na ya (ọ bụ ezie na KDE na-efu) karịa mfe.
Enwere m yaourt na distro a?
M na-eji pamac-aur maka eserese eserese, mana ịnwere ike ịwụnye yaourt n'enweghị nsogbu. Dịka m kwuru, ọ bụ nkesa nkenke a na-ahụ maka ya.
Jiri ọgba aghara, wụnye arch kde, akụkụ dị mma n'etiti, wụnye nhọrọ Anarchy Advanced na-enye ohere ịwụnye kde pere mpe na nkọwa. Ihe ojoo, nkewa nke aka ya, gpt disk, edeghi mgbanwe na ntinye ya. Gbalịa ihe niile. Na njedebe m hichapụ nkebi, m ga-agbanyeghachi, ma jiri nkewa akpaka, m na-eji disk Linux niile. Anaghị m eji dualboot. Enweghị m ike ịwụnye njiko site na nsusu ọnụ wee nwalee oge 3, ọ gaghị ebu ibu, ọ bụ ya mere m jiri ọgba aghara. Achọrọ m Arch, ọ bụ ezie na Manjaro nwara m ọnwụnwa.
Ọ bụ onye nrụnye dịka Architec ma ọ bụ Archanywhere ka ọ bụ dum distro distro dị ka Manjaro, nyocha Anarchy ma ọ dị ka onye nhazi dị ọcha mana mgbe etinyere ya, a na-akpọ ya Anarchy na buut, splash.png, information, screens etc. Archanywhere emeghị nke ahụ. Rụnyere Arch wee kwuo Arch ... Ọ bụghị ngafe itinye Anarchy na arụnyere distro n'agbanyeghị ịbụ onye nrụnye. Na-eje ozi ee. Enweghị m ike ịwụnye ọnọdụ nsusu ọnụ. Site na ọgba aghara enwere m ike, achọghị m nri nri. Achọrọ m njiko dị ọcha. Ọ bụrụ na awụnyere splash.png, syslinux.cfg wdg ma gbanwee ka ị kwuo Arch. A ga-emebi ikike iji ya?
Zaghachi Miguel C.
Nkesa wụnyere ya ụnyaahụ ma ọ nwere ọtụtụ arụmọrụ, m na-eji njiko ruo afọ abụọ, ndọghachi azụ ọ nwere bụ na ịnweghị nhọrọ ịhọrọ swap faịlụ swap maka mgbanwe ahụ, dozie nkewa ma mepụta swap ozugbo na ọ bụ tiori na ha kuziri m ulo akwukwo.
M na-eme nwụnye omenala ọ naghị emepụta m swap. Ikekwe ọ bụ n'ihi ụdị nrụnye ị họọrọ.
Ọ na-esiri m ike ịghọta ihe mgbaru ọsọ nke ịmepụta distros dabeere na Arch, ma ọ bụrụ na onye ọrụ nwere ike iwunye Arch n'ụzọ zuru oke ma nwee ihe ijuanya niile na nkwa ndị a.
Amaara m na nrụnye ahụ nwere ike ịdị ntakịrị, mana echere m na ịmara ngwaike gị nke ọma, ị nweela ọkara nrụnye n'ime akpa gị. Ihe ndị ọzọ bụ ịgụ otu faịlụ file.txt nke iso na-eweta na ọ bụ ya. N’ụlọ akụrụngwa m, anaghị anakarị ihe karịrị nkeji iri iji nweta usoro ntọala. N'ezie achọrọ ka anya na wiki, mara otu esi eji pacman, yana ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ.
Ejitụbeghị m ndụdụ ndị a, echeghị m na m na-eme ya, ọ dị m ka ha dị ọtụtụ.
Ndị mmepe a nwere ike itinye aka na mmepe Arch ma sonyere ndị agha. Anaghị m ajụ a ọzọ ọrụ na onye-enyi na enyi CLI / GUI installer, ma bia… ọ bụghị na ihe ọjọọ. Atụla egwu nke njikwa. KISS.
Zaghachi Cristian Garcia
Onye ọ bụla na-eche na ihe pụrụ iche banyere Arch bụ na ọ siri ike ịwụnye bụ oke egwu, n'ihi na inwe nkuzi abụghị ọbụna ihe ịma aka dị mfe. Ihe dị mma banyere Arch bụ ebe nchekwa ya na AUR wee nwee ike ịwụnye ihe niile dị mkpa na-enweghị imeghe ihe nchọgharị ịntanetị.
N'ọnọdụ ọ bụla, echiche ahụ bụ, ọ dị nwute, nke kachasị ike ma ọ dịkarịrịnụ anụ, nke a bụ ihe ihere. Ma site n'ụzọ, mara na ị ga-eche banyere Manjaro ma ọ bụ Antergos nwekwara echiche gị mere obtusely emechi; Na itinye aka, Ubuntu na-atụgharị, n'ihi ịdị mfe ya na ndakọrịta yana nkwụsi ike, ịkwaga na ụlọ ọrụ na gburugburu ụlọ ọrụ, yana ọrụ ọha na eze, maka nke a, ị nwere London Underground, ka ịnye obere ihe atụ.
Ọ bụrụ na ị hụ na ọ naghị amata njikọ ịntanetị gị, leghara nchịkọta nke sava ahụ
N'agbanyeghị nke ahụ ọ na-ada ada karịa egbe egbe
mana enwere ndị na-etinye ya n'enweghị nsogbu
Ide ederede nke onwe gị na git